Iyunithi ye-Chic ne-Cozy 2Br e-Oasis + NETFLIX
Pasig, NCR, i-Philippines
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Lovely
Leli gumbi lokulala eli-2 lihlala e-One Oasis Condominium ePasig City. Ungasebenzisa zonke izinsiza (indawo yokubhukuda, inkundla yokudlala, inkundla yebasketball) mahhala ngaphandle kwendawo yokuzivocavoca. Le ndawo ikunikeza i-resort vibe ephumuzayo ekwenza uzizwe ukude nesiphithiphithi sempilo yasedolobheni.
Hlela: Ngenxa yesimo samanje sobhubhane lwe-COVID 19, zonke izinsiza zisavaliwe kuze kube manje.
Iyunithi yethu yokulala engu-2 inamavayibhu asekhaya futhi athokomele akwenza ufune ukuhlala ngaphakathi usuku lonke. Sizokwenza isiqiniseko sokuthi amalineni namathawula kuhlala kusha, kuhlanzekile futhi kuhlanzekile. (Singakwazi ukuhlinzeka ngamathawula angu-4 kuphela lapho uhlala khona) Sinikeza izinto eziyisisekelo ozidingayo ngenkathi uhlala endaweni yethu. Ungakwazi ukupheka isidlo osithandayo futhi ungasebenzisa noma yini oyithola ekhishini.
4.95(153 okushiwo abanye)
Indawo itholakala phakathi nezindawo ezimatasa e-Ortigas extension. Ngaphakathi emagcekeni uzizwa uphephile ngoba le ndawo igcwele onogada abazulazula ngezikhathi ezithile futhi amakhamera eCCTV afakwe kuwo wonke amakhona ebhilidi ukuze kuqiniswe ukuphepha. Indawo eseduze nayo ilungele ukugijima noma ukuhamba ngezinyawo. Sinezakhiwo zezentengiselwano ngaphambili ezinikeza izinsiza eziningi ozidingayo njengezindawo zokungcebeleka izinzipho, amasaluni, izitolo zezingubo, indlu yetiye yobisi, izitolo ze-rtw, i-massage spa, indawo yokudlela njll. Uma ufuna ukuthenga okuthile phakathi nobusuku kukhona. futhi 24/7 izitolo ezikahle ngaphandle. Ngaphesheya komgwaqo, kunezitolo ezinkulu ezi-2 ezinezitolo ezinkulu lapho ungathenga khona zonke izidingo ozidingayo. Inqwaba yokudla okusheshayo nezindawo zokudlela nazo zikhona eduze.
Ngithanda ukuhlangana nabantu abasha! Uma ufuna inkulumo encane, noma udinga okuthile, ngicela ungangabazi ukungibuza. Btw, ngihlala esitezi esisodwa...
ULovely Ungumbungazi ovelele